"Mandray anjara mavitrika ary manantena vokatra tsara izahay" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Delegasiona mafonja. Tonga eto Antananarivo ireo solontenan’ny Faritra Anosy. Delegasiona mafonja no tonga eto avy amin’ity faritra iray amin’ireo faritra 22. “Mandray anjara mavitrika amin’izao fivorian’ny Frankofonina izao izahay avy amin’ny Faritra Anosy ary manantena vokatra tsara izahay” hoy Razafindramaro Tanjaniaina Julio, Lehiben’ny Faritra. Voalazany fa niezaka ny Faritra hitondra olona maro ka ben’ny tanàna efatra isaky ny distrika no tonga miaraka amin’ireo mpiasan’ny faritra. Tsiahivina fa distrika telo no mandrafitra ny faritra dia ny distrikan’i Tolagnaro, ny distrikan’i Amboasary Atsimo ary ny distrikan’i Betroka. Ny faritra dia ahitana mponina tombanana ho maherin’ny 600 000 isa mipetraka amin’ny velaran-tany mirefy 30 198 km². Ny distrikan’i Tolagnaro dia misy kaominina 27 sy fokontany 215. Ny distrikan’i Ambosary Atsimo indray dia ahitana kaominina 16 ary fokontany 307. Ny distrikan’i Betroka kosa dia ahitana kaominina 21 sy fokontany 182.
“Ny naharesy lahatra anay hitondra delegasiona hanatrika ny hetsika manodidina ny fivoriana antampon’ny Frankofonia ity dia maro” hoy Tanjaniaina Julio. Ny voalohany amin’ireny dia ny resaka toekarena. Nanazava ny lehiben’ny faritra fa isan’ny mampalaza ny faritra Anosy ny fisian’ny orinasa QMM. Mahazo tombony betsaka sy mivantana amin’io ny kaominina Tolagnaro. “Tiana ho fantatry ny olona sy ny mpandraharaha hafa kosa fa tsy io ihany no zava-misy ao anatin’ny faritra” hoy ny lehiben’ny faritra. Izany no nanentanana ireo mpandraharaha ao anatin’ny faritra nanao ezaka hiomana handray anjara amin’ny fampirantiana tsy maintsy hisy mandritra ny frankofonia. Nohazavain’ny lehiben’ny faritra fa anjaran’ny mpandraharaha tsirairay no miezaka mitady ny fifandraisan’ny amin’ny mpandraharaha hafa mandritra ny fihaonana antampony. Ny nataon’ny Faritra kosa dia nanentana ireo vehivavy hamokatra ary anjaran’ny faritra no mampiranty izany ao anatin’ny tranohevan’ny faritra amin’ny toerana roa dia ny hita eny amin’ny Village de la Francophonie andaniny sy eny amin’ny Salon de l’Industrie ankilany. “Samy misy tranohevan’ny Faritra ireo toerana roa ireo” hoy ny lehiben’ny faritra. Voalazany fa ny fikambanan’ny Vehivavy 8 Mars sy ny fikambanan’ny Femmes entrepreneurs no nandray anjara mavitrika amin’ny fampirantiana ny vokatra. Isan’ny vokatra hita any any tantely sy ny baies roses. Raha ho an’ny faritra Anosy manokana dia nanomboka ny tapaky ny volana mey teo ny fiotazana ny vokatra baie rose izay karazana dipoavatra. Ny baie rose dia iray amin’ireo vokatry hita ao amin’ny faritra ary vokatra natokana haondrana. Izy natokana haondrana izay indrindra no ilaina manatrika ny fivoriana iraisam-pirenena tahaka izao hoy ny mpanara-dia an’ity lehiben’ny faritra ity.
Ankoatra ny fandraisana anjara mavitrika amin’ny fampirantiana eny amin’ny frankofonia dia maro ny fandaharam-potoan’ireo delegasionin’ny faritra tonga ao Antananarivo. Ny talata maraina teo izao ny delegasiona dia noraisin’ny talen’ny BCMM (Bureau des Cadastres Miniers de Madagasikara) teny Ampandrianomby. “Zava-dehibe ho anay ny noraisin’ny tale jeneralin’ny BCMM teo. Ny fihaonana dia nahafahanay nametraka ny olana misy araka ny fahitanay azy ary ny tale jeneraly kosa afaka nanazava ny momba ny frais d’administration minière sy ny permis d’exploitation” hoy ny lehiben’ny faritra. Nandritra ny fihaonana no nanazavan’ny tale jeneralin’ny BCMM ny fomba fiasa. “Misy kaominina tahaka an’i Anakafy sy Mahatalaky izay mandray frais d’administration minière mihoatra lavitra noho ny subvention alefan’ny fanjakana foibe koa araka izany dia tena zava-dehibe ny nandre ny fanazavana nentin’ny talen’ny BCMM ho an’ireo solontenan’ny ben’ny tanàna nandre mivantana ny fanazavana” hoy ny delegasion’ny faritra Anosy nihaona tamin’ny tale jeneralin’ny BCMM. Manana tombondahiny ny faritra anosy satria manana rantsa-mangaika ao Tolagnaro ny BCMM.
Ankoatra izay dia efa misy koa ny fandaharam-potaon’ny delegasiona hihaona amin’ireo tomponandraikitry ao amin’ny Ministeran’ny Atitany sy ny fanapariaham-pahefana izay miahy mivantana ny kaominina. Ao koa ny fitsidihana kaominina sasany tahaka ny kaominina Ivato izany.
Antenaina tokoa araka izany fa hitondra vokatra matevina ity delegasiona mafonja ity.